Umenzi weNdebe yeSauce egqibeleleyo kunye neFektri | Huanna
Njengomvelisi ngobuchule ukusetyenziswa-single iikomityi zokusela kunye isikhongozeli ukutya iminyaka engaphezu kwama-13, kufuneka ubungakanani ezahlukeneyo iikomityi Pla isahlulo, Pla iikomityi ice cream, iikomityi Pla ukusela, U uhlobo PLA iikomityi, deli ikomityi / isikhongozeli, Pla isitya kunye ezineziciko yabo bonke. Iindebe zethu zePLA ezibandayo ziyinto efanelekileyo endaweni yeekomityi zeplastikhi zemveli njengoko iikomityi zethu ziyi-100% yecompostable kwaye enokuboliswa ziintsholongwane. Izinto esizisebenzisayo lilungu losapho lwe-polyester, kwaye into yoqobo yanele kwaye iveliswa ngaphakathi embona, i-tapioca njalo njalo. Kwimeko yokufaka umgquba kwimizi-mveliso, i-PLA kunye nezinye izinto ezinokuboliswa ziintsholongwane zingaphelanga iintsuku ezili-180, iipesenti ezingama-90 zezinto eziphilayo zihla zenyuka emanzini nakwikhabhon diokside. Ke ngoko, iikomityi zethu ezibandayo zi-eco-friendly.
Urhwebo lwethu lwaziwa ngokubanzi kwaye luthembekile ngabathengi kwaye lunokuhlangabezana rhoqo nokukhulisa iminqweno yezoqoqosho nezentlalo kwiminyaka eli-18 yeFektri yaseChina Iphakheji eNcinci yokuYila imbiza yeSauce Jam Cup, umGaqo wethu weCandelo loShishino: Udumo lokuqala; Isiqinisekiso esisemgangathweni; Umthengi uphakamileyo .
Iminyaka eli-18 yeFektri yeNdebe yePlastikhi yePhakheji encinci kunye noMgangatho oPhezulu oXhasiweyo weNdebe ye-Sauce, iimveliso zethu ziphumelele igama elihle kwilizwe ngalinye elinxulumene noko. Kungenxa yokuba ukusekwa kwenkampani yethu. sinyanzelise inkqubo yethu yokuvelisa izinto ezintsha kunye neyona ndlela yakutshanje yokulawula umhla, ukutsala ubuninzi beetalente kolu shishino. Sisithathela ingqalelo isisombululo esisemgangathweni njengoyena mntu ubalulekileyo kubuntu bethu.
Egqithileyo Isaladi isitya
Okulandelayo: U Imilo yeNdebe
Indebe yeSauce yePla